Iimpazamo ezintlanu zokuPhepha nabaThengi beWebhu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Enye yeengxaki eziphambili ezihlala zenzeka xa qala ukuba yinxalenye yehlabathi loyilo lweWebhu, kukwazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka elandelwe kunye nabaxumi kwaye yeyiphi imali efanelekileyo ekufuneka ihlawulisiwe ngomsebenzi ngamnye.
Ngesi sizathu, kwaye ngezantsi, siza kukubonisa iimpazamo ezi-5 ekufuneka uziphephe kunye nabaxumi bakho.
1 Iimpazamo ezintlanu ukunqanda nokuba kunjalo
1.1 Ayilungisi yonke into ngaphambi kokuthetha okanye ukudibana nomthengi
2 Gxila kuwe hayi kumthengi
2.1 Ukungabhajethi ngobulumko
2.2 Hambisa uyilo lokuqala kubaxhasi
Iimpazamo ezintlanu ukunqanda nokuba kunjalo
Ayilungisi yonke into ngaphambi kokuthetha okanye ukudibana nomthengi
Enye yezona mpazamo ziphambili zenziweyo xa uqala kuYilo lweWebhu, kukukholelwa oko bonke abathengi bayafana kwaye ukuthetha ngokufanayo kuye wonke umntu kuya kukwanela, kuba ekuqaleni uninzi luthathela ingqalelo kuphela ekufezekiseni ukuthengisa kwaye beka izinto ezibalulekileyo kwindawo yokuqala kunye neemfuno ezinokuba ngumthengi onokubakho.
Khawucinge ngoku Izinto eziphambili ngokubaluleka kubathengiKuba ngokunokwenzeka okubalulekileyo kuwe akufani kumthengi kwaye ukuba into ocinga ukuba ibalulekile ayisiyiyo eyona nto iphambili kuluhlu lwabathengi, ngokuqinisekileyo izinto aziyi kulunga. Ke Kufuneka uzilungiselele ngaphambi kokuhlangana, ngendlela eya kuthi uyiqonde eyona nto ixatyiswa ngumxumi kwaye kwangaxeshanye ucacise nawaphi na amathandabuzo ngokuthetha ulwimi lwabo.
Gxila kuwe hayi kumthengi
Xa nidibana kwaye thetha nomthengi okokuqala, akufuneki ulibale ukuba inyani isiphumo kubaluleke ngakumbi ukumamela kunokuthetha. Kuba ukwenza umsebenzi, kubalulekile ukuba wazi ukuba unomdla wantoni umthengi, ukuba unamathandabuzo, iinkxalabo okanye iinkxalabo ofuna ukuzicaciselwa kwaye wazi ukuba ziyintoni amaxabiso ashukumisayo.
Ukuba umthengi unomdla kwixabiso kuphela, awunyanzelekanga ukuba uthethe ngomgangatho, kuba iya kuba lidabi elilahlekileyo; kodwa Ukuba ujonga umgangatho, uya kuqaphela ukuba unexabiso. Akufuneki ubuze umthengi malunga nokuba unamalini kuhlahlo-lwabiwo mali, kuba akayazi kwaye akunyanzelekanga ukuba azi ukuba lixabiso lini lomsebenzi wakho. Kwahlukile ukuba ukubuza ukusuka kumzuzu wokuqala yintoni ixabiso lomsebenzi wakhoKule meko, kuya kufuneka uphendule ukuba iindleko zomsebenzi ziyahluka ngokwenkonzo oya kuthi uyinike, kwaye xa uyazi, uya kuqhubeka uthumele uhlahlo-lwabiwo mali.
Enye yezona mpazamo ziqhelekileyo zenziwe xa qala ngoYilo lweWebhu, ihlala inika abathengi kuphela uhlahlo-lwabiwo mali oluvaliweyo apho kungachazwanga ukuba yintoni engenayo okanye eyekayo ukungena kwiindleko zokugqibela zomsebenzi.
Ngokwesiqhelo oku kuneengxaki ezimbini, eyokuqala kukuba xa umba weendleko uyingxaki, akukho ndawo yokuxoxa okanye yothethathethwano kuba inye kuphela indleko ehanjisiweyo kuhlahlo-lwabiwo mali kwaye eyesibini yeyokuba Ayichazi into ebandakanyiweyo okanye hayi kwiindleko zokugqibela, abathengi bahlala belinda ixesha elide kwinto abayihlawuleyo. Kodwa ngokwenene abathengi abayazi into exabisekileyo ngumsebenzi wakho kwaye yimpazamo yakho ukulindela ukuba banamandla okuxabisa into abangayaziyo.
Xa ulungiselela uhlahlo-lwabiwo mali, kufuneka ulungenise ngokubhaliweyo, unikezele ngeendleko ezahlukeneyo kwaye uthathele ingqalelo ukuba ngaba abathengi bafuna iindleko okanye umgangatho.
Hambisa uyilo lokuqala kubaxhasi
Kule meko kungcono bonisa abathengi uyilo olusuka kwiLaptopUkusukela ngamanye amaxesha xa usenza uyilo kwaye uluhambisa kumthengi, banokuthatha isigqibo sokusebenza nomnye umntu kwaye bathathe uyilo lwakho, ke omnye umntu uya kuba ekhuphela umsebenzi wakho.
Siyathemba ukuba ezi ngcebiso sikunike zona ziluncedo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iimpazamo ezintlanu zokuphepha kunye nabaxhasi beWebhu
Ukuthumela ngaphandle kweeFayile zeFotohop kwiifayile ezizimeleyo